The girl Nala – Petunity
The girl Nala
ခွေးမလေး နာမည် Nala
အသက် ၁နှစ်ခွဲ သားအိမ်ထုတ်ပြီး ကာကွယ်ဆေးအကုန် up to date ထိုးပြီး။
ကလေးက အင်မတန် ကြောက်တတ်ပါတယ် ဒါပေမယ့် အချိန်သေချာပေးရင် အင်မတန် လူကိုစွဲစွဲလန်းလန်းချစ်တဲ့ကလေးပါ။
ဇာတ်လမ်း အပြည့်အစုံ။ ။ သူငယ်ငယ်လေးကတည်းက လမ်းပေါ်ကနေမွေးစားခံရပါတယ်၊ ကံကောင်းတာပေါ့နော် သခငါတွေက အင်မတန်ချစ်ပါတယ်။ ကံဆိုးတာက အခု မွေးစားထားတဲ့ အိမ်မှာ ဘယ်လိုမှ အဆင်မပြေတော့လို့ အိမ်အသစ်ရှာရမှာပါ။ မပြေတဲ့ အကြောင်းအရင်းက အရင် တူတူနေနေကျ ခွေးမလေးက Nala ကို အကြောင်းမဲ့ အရမ်းကိုက်လိုက်လို့ပါ။ အဆင်ပြေအောင်ကြိုးစားပေမဲ့ ခေါင်းပေါက်ပြီး ချုပ်ရတဲ့ အဆင့်အထိရောက်သွားပါတယ်။ (ကိုက်တတ်တဲ့ခွေးကတော့ အိမ်ရှင်မှာ တာဝန်ရှိပါတယ် အိမ်ရှာပေးလို့ မဖြစ်ပါ)။ သူတို့အိမ် က ခွေးထီးနဲ့ တည့်ပါတယ်။ ခွေးလေးတွေ အတွက် တစ်အိမ်က တစ်အိမ်ပြောင်းတာ အရမ်း စိတ်ဒဏ်ရာ ရစေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မဖြစ်နိုင်တဲ့ အခြေအနေမို့ ဝင်ပါရတာပါ။
ဘယ်သူနဲ့ သင့်တော်မလည်း ။ ။
ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် လုပ်တာ မဟုတ်ပါဘူးနော် ဒီအချက်လေးတွေနဲ့ သင့်တော် မှ မွေးဖို့ စဉ်းစားပေးပါနော်။ ကလေး စိတ်ဒဏ်ရာရမှာဆိုးလို့ပါ။
၁။ ခွေးမွေးဖူးသူ (တကယ် နားလည်သူ)
၂။ စိတ်ရှည်မဲ့သူ (တပတ် က နေ သုံးပတ် အတွင်းသူ ကြောက်နေမှာပါ၊ အနည်းငယ် ချော့ချော့ ပေးပြီး ကိုယ့်ကို ယုံကြည်လာအောင် လုပ်ရမှာပါ)
**** Nala က ယုံကြည်သွားရင် အရမ်းချစ်သွားမှာပါ တကယ် လိမ္မာတဲ့ ကလေးပါ။****
၃။ အိမ်လုံတဲ့သူ (အကြောက်မပြေခင် ထွက်ပြေးမှာကြောက်လို့ပါ Nala က လက်ရှိ indoor ခွေးပါ။ သေးကို စနစ်တကျပေါက်တတ်ပါတယ်။ ခြံနဲ့ဆို အပြင်မှာ ပေါက်ဖို့ ပြလို့ရပါတယ်။ အခု အိမ်က တိုက်ခန်းဆိုရင်တော့ ဝရံတာမှာ pad သို့ သတင်းစာ နဲ့ သွားပါတယ်။)
၄။ ကလေး မရှိတဲ့ အိမ် (ကြောက်တတ်တဲ့ခွေးက ကလေးဆိုပိုကြောက်ပါတယ် ကလေးတွေက ခုန်ပေါက်ပြေးလွှား အော်ဟစ်ဆော့တတ်လို့ပ့ါ။ 😅)
၅။ ခွေးရှိလို့ရပါတယ် (လိမ္မာတဲ့ခွေး အထီး ဖြစ်ရင်ရပါတယ်။ Nala က ရန်စမလုပ်တတ်ပါ။ သို့သော် ခွေးအသစ် လူအသစ် မရင်းနှီးသေးရင်ကြောက်ပါတယ်။ အထီးဆိုလို​့စိတ်မပူပါနဲ့ Nala က သားအိမ်ထုတ်ထားပါတယ်။)
ဒီအချက်တွေ နဲ့ ညီ ပြီး တကယ်စိတ်ဝင်စားရင် ပက်ယူနတီ messenger ကိုဆက်သွယ်ပေးပါ။ Nala လက်ရှိ သခင်ကို ဆက်သွယ်ပေးပါမယ်။
Meet Nala, sweet female dog, 1.5 years old, fully vaccinated and spayed. Trained to pee atacertain spot.
Nala has suchasweet personality but you have to work it to gain her trust, she can be very timid at first but so worth it once you gained her trust.
Nala was rescued from the streets when she wasapuppy. She has two other dogs that she lives with but she has constantly being attacked by another female dog (gets along with the male). It has gotten so bad that they once had to get her stitches. It breaks their heart to give her up but the other female is aggressive and no way she can be rehomed so we need to findaright home for sweet Nala.
It's super stressful foradog to go from one home to another so we want to make this right. Beggars can’t be choosers but for Nala’s sake, we want you to only contact us if you meet the criteria below.
1. Experience with dogs especially rescued dogs
2. Dedicated and committed to this (it will take 1 to2weeks to gain her trust but once again it will be so rewarding)**** Nala is suchagreat dog withoutadoubt.
3. Secure fence/home (she currently is an indoor dog but if you haveayard please be sure she cannot break out and run as she will need time to get used to you as I cannot stress this point enough)
4. No little kids (Because kids make timid dogs timider. Kids run, jump, scream the list can go on)
5. Other dog can be okay, as long as the other dog is friendly and confident.